Blowback from Fast-Food Industry as Zimbabwe Bans Styrofoam - allAfrica.com
Although the government intends to "curb environmental and health hazards" associated with the material, the authorities haven't given an alternative yet.
Zimbabwe: Food Vendors Defy Govt Styrofoam Ban
New Zimbabwe, 18 July 2017
Informal food vendors and small restaurants in the capital continue to use Expanded Polystyrene or kaylites for food packaging in spite of a government ban announced last week. Read more »
Zimbabwe: Reprieve for Styrofoam Manufacturers, Users
The Herald, 18 July 2017
Government has given manufacturers of polystyrene material (kaylites) a three-month reprieve to clear their stocks, but members of the public will use them at their discretion. Read more »
Zimbabwe: Mixed Reactions As Govt Bans Styrofoam
News24Wire, 14 July 2017
Zimbabwe says a ban on polystyrene food packaging has come into force with immediate effect in a bid to curb environmental and health hazards associated with the material. Read more »
Zimbabwe: Styrofoam Ban - Defiant Citizens Face Prosecution
The Herald, 13 July 2017
Government has with immediate effect banned the use of polystyrene material, commonly known as kaylite, and related plastic packaging citing health hazards and pollution. The ban… Read more »
Zimbabwe: Styrofoam Ban in Food Packaging Begins - Report
New Zimbabwe, 12 July 2017
Government has finally begun implementing the Statutory Instrument which bans the use of Expanded Polystyrene (EPS) known as kaylites in the food industry. Read more »
Zimbabwe: Is There Still a Kaylite Ban in Zim?
Zimbabwe Standard, 16 May 2016
With the current widespread use in Zimbabwe of Expanded Polystyrene (EPS) - popularly known in the country as kaylites -- it is very difficult to believe that they were ever… Read more »